Kufezeke iphupho leminyaka kojoyine i5 FM
UKARABO Ntshweng ongumsakazi wohlelo lwangezintathakusa kwi5 FM Isithombe:SITHUNYELWE
KUFEZEKE iphupho leminyaka kowayengumethuli wohlelo lodado kuSABC 1, iYOTV, uKarabo Ntshweng, njengoba esewumsakazi wesiteshi sentsha i5 FM.
UKarabo, oseneminyaka engu-17 eyibambile kule ndima, uzoqala ukusakaza uhlelo lwasekuseni ngezintathakusa, phakathi kuka4 no6, olusihloko luthi Catch Early Morning with Karabo kusukela ngoMsombuluko.
Lo msakazi oyiqhalaqhala onamahlaya uthe wacijwa kakhulu iYOTV, okuwuhlelo olwamthatha lwambeka kuleli zinga asekulo.
"Unyaka ka2020 usho ukuphela kweminyaka eyishumi ngiyibambile endimeni yezokusakaza. Ngikujabulele kakhulu ukuthatha lesi sinyathelo emsebenzini wami," kusho uKarabo owaqala ukusakaza esiteshini sasesikhungweni semfundo ephakeme. "Yilapho ngaqala khona ukuzifela ngomkhakha wezokusakaza."
Emuva kokuziqeqesha ikhono lakhe, uKarabo wehlelwa ingqayizivele yethuba lokusakaza esiteshini esizinze eGoli i947, lapho athula khona izinhlelo eziningi futhi abuye abe yi-digital producer kwiPrimedia Group.
Njengamanje ubeka ikhono lakhe kwelinye izinga njengoba esezosakazela isiteshi esilalwela kuzwelonke. "Ngichithe isikhathi esiningi ngisebenza ngemuva futhi ngigxile emkhakheni wezobuchwepheshe, ngibe ngisakaza ngezimpelasonto kodwa ngijabule ngoba ekugcineni sengizokwazi ukwenza umsebenzi engiwuthandayo zonke izinsuku futhi ngilalelwa kuzwelonke.
Abantu abakhule bengibukela kwiTV yonke le minyaka, ekugcineni sebezokuzwa izwi likaKarabo emsakazweni."
Uthe ukhule ezifela nge5 FM futhi efisa kabi ukuba ngelinye ilanga agcine esesakaza kuyo.
“I5FM beyilokhu iyintandokazi yentsha yaseNingizimu Afrika ngoba ithinta yonke into ekhonzwe yintsha. Njengomuntu ozithandayo izindaba ezithinta intsha yasezweni lethu futhi okhule elalela umculo wakuleli, akukho okungifanele ukwedlula lo msakazo."
Mayelana nokuthi yini engalindelwa kuye ngabalaleli balo msakazo, uKarabo uthe kuwumthwalo omkhulu ukuba wumsakazi wokuqala ukulalelwa ngabantu.
"Uhlelo lwami luzoletha umfutho, izingoma ezimnandi nokuzobakhuthaza ukuba baluqale kahle usuku." Umphathi wezinhlelo kwi5 FM, uSiya Fikelepi, uthe bahambela phezulu ngokuhlabana ngekhono likaKarabo kulo msakazo.